SONATA-CANTATA: July 2009
ဆန့်ကျင်ဘက်တွေရဲ့အားပြိုင် လွန်ဆွဲမှုတွေကြား ပစ္စုပ္ပန်ဟာ အမောတွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်။
ဘယ်လိုလျှောက်မလဲ ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲ…
ငါနဲ့ မတူ၊ ငါလိုမဟုတ် ပါလား ဆိုတဲ့ ကွာခြားချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ဒေါသတွေ
ပိုင်ရှင်အမည်တပ်၊ တံဆိပ်ကပ်လိုက်မိတဲ့ မောဟတွေ
တတ်နိုင်သမျှ နည်းအောင် ကြိုးစားရင်း
သက်တောင့်သက်သာ ခရီးဆက်ပါရစေလား…။ ။
ကိုအောင်သာငယ် ရေးခိုင်းလို့ ရေးပါတယ်။
မယုဝရီရဲ့ ကော်မန့်မှာ အမှတ်တရ ဆက်စပ်သွားတဲ့
မသီတာ ရေးခဲ့တဲ့ ဘောင်
ကိုဧရာ ရေးတဲ့ ဤလူ့ ဘောင်
သူက အစဉ်အလာကြီးသလို အရှိန် အ၀ါလည်း ကြီးတယ်။
သူရဲ့ ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစား ကမ္ဘာကျော်တယောက် သူ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်တာ မဆန်းပါဘူး။ ကမ္ဘာကျော် ဘယ်လောက် လည်လည်၊ နေသူရိန်ရဲ့ စက်ကွင်းထဲက ရုန်းမထွက်နိုင်တာ ဒီနေ့အထိ။
နေသူရိန်က စည်းကမ်းတော့ရှိတယ်။ အင်အားကြီးတယ် ဆိုပြီး နိုင်လိုမင်းထက် ပြုတတ်သူ တယောက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့သိက္ခာကို ဘယ်တော့မှ အပွန်းအပဲ့ မခံဘူးဆိုတဲ့ လူစားမျိုးပေါ့။
ကမ္ဘာကျော်လား။ သူကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ သူနဲ့ ပတ်သက်မိသူတိုင်း သူ့ရဲ့ ညှို့ငင်အားတွေက ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ခက်တယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ သူ့ကို သံယောဇဉ်ကြီးလွန်းသူလေးကတော့ လမင်းခင်။
ပြုံးလိုက်ရင် ပါးချိုင့်လေးပေါ်တဲ့ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ပေါ့။ နူးညံတယ်။ သိမ်မွေ့တယ်။ သည်းခံနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး သစ္စာလည်းရှိတယ်။ ကမ္ဘာကျာ်ကို အရိပ်လို စောင့်ကြည့်နေတတ်သူလေး။
အဟိမ်း… သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇတ်လမ်း ရေးမလို့ မဟုတ်ပါဘူး။
လာမည့် July 22, 2009 ရက်နေ့
သူ့ဖာသူ လည်ရင်း နေကိုလည်း ပတ်နေရတဲ့ ကမ္ဘာ၊ ကမ္ဘာကို ပတ်ချာဝိုက်လို့ လိုက်နေရတဲ့ လ၊ နေ နဲ့ ကမ္ဘာ ကြား လ ရောက်ပြီး သူတို့ သုံးဦး တတန်းထဲကျလို့ နေကြတ်မှာမို့ပါ။
Location(Singapore) Start Time (08:40:52) End Time (09:43:56) Maximum Eclipse at (09:11:26)
ဆက်စပ် ဖတ်စေချင်တဲ့ပို့စ် နမောတေ အစချီ ဂါထာ
နွေးထွေးတဲ့ နှင်းဆီရင်ခွင်ကို သိုင်းဖက်
နူးညံ့တဲ့ ကဗျာရင်ခွင်ပေါ် မှေးစက်
အိပ်မက် ဦးမယ်။ ။
(ပုံကို Insight Guides - India စာအုပ်မှ ယူပါသည်။)
မရည်ရွယ်ဘဲ စော်ကဲမင်းဖြစ်သလို၊ မပြင်ဆင်ဘဲနှင့် ကျမ ကကြီး၊ ခကွေး ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ပထမ နှစ်နှစ်သည် ဆရာဖြစ်သင်တန်းတက်နေရသော အချိန်များဟု သတ်မှတ်ရပေမည်။ သင်ပုန်းကြီးသင်ဖို့ ဒီလောက်အချိန်ယူရလား ဟု အပြစ်ဆိုလျှင်လည်း ခံရပေတော့မည်။ အစမ်းသပ်ခံ တပည့်များနှင့် သူတို့ မိဘများ၏ စိတ်ရှည်၊ သည်းခံ ဇွဲသန်မှုကို ဘယ်နေရာတွင် ဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ရမလဲ ကျမ မသိသေးပါ။
သင်တန်းကာလတွင် မိမိဘက်မှ မြန်မာစာပေ၏ စည်းကမ်းရှိမှုနှင့်၊ အဆင့်အတန်းရှိမှုကို ကိုယ်ပိုင် ဉာဏ်ဖြင့် မမိတမှီ ထောက်ဆမိလာသော်လည်း ကလေးများဘက်မှ တတ်မြောက် နားလည်မှုအပိုင်းမှာမူ စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် နှေးကွေးနေသဖြင့် ကျမကို ကျမ ဆရာအဖြစ်မှ ရပ်ဆိုင်းဖို့ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားခဲ့ပါသည်။ အတွေ့အကြုံရှိသော ဆရာမအစစ်များထံ အခက်အခဲကို တင်ပြ၍ အားနည်းချက်များကို ရှာဖွေပြုပြင်ခဲ့ရပါသည်။
ပထမဦးဆုံးအနေနှင့် ကျမ၏ သင်နှုန်းကို လျော့ချရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျမသင်နေပုံက သူငယ်တန်း ကလေးတွေကို (၅)ရက်အပြတ် Short Course တစ်ခုကဲ့သို့ သင်သည်။ တစ်ပတ်တွင် တစ်ရက်သာ တက်ရသော သင်တန်းတွင် ထိုတစ်ရက်၌ သင်ခန်းစာ တစ်ခုပြီးအောင်သင်သည်။ နောက်တပတ်လာခဲ့ နောက်သင်ခန်းစာ တစ်ခု။ တတ်စေချင်သည့်ဇော ကြီးလွန်းသွားခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယအနေနှင့် ကလေးများကို စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ ကျက်ခိုင်းခြင်း၊ အမှားအမှန်ရွေးခြင်း၊ ကွက်လပ်ဖြည့်ခြင်း စသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တတိယအချက်မှာ အခက်ခဲဆုံးဟု ဆိုရမည်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည် သူတို့သင်ယူနေသော ဝေါဟာရများနှင့် ရင်းနှီး မနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုဝေါဟာရများကို သူတို့လက်တွေ့ဘ၀ထဲရောက်အောင် ရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သင်ခန်းစာ(၁) အ အာ အား မှပင် စပါပြီ။ ပ ရေ ပ၊ ၀ ရေး ချ ၀ါ။ ပ၀ါ။ ဆရာမ ပ၀ါဆိုတာ ဘာလဲဟင်။ သြော် ပ၀ါဆိုတာ အ၀တ်စ။ လက်သုတ်တော့ လက်သုတ်ပ၀ါ၊ ခြေသုတ်တော့ ခြေသုတ်ပ၀ါ၊ မျက်နှာသုတ်တော့ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါ။ ဟောဒီမှာကြည့် ဆရာမက ပ၀ါလေးကို ပုခုံးပေါ်ဒီလိုတင်ပြီး ဘုရားရှိခိုးတယ်။ (ကျမက အိတ်ထဲတွင် အမြဲထည့်ထားသော ပ၀ါကို ထုတ်၍ ဘုရားရှိခိုးပြသည်။) ဆက်တိုက်လာပါပြီ... ဖလား ဆိုတာ ခွက်၊ နဂါးဆိုတာ dragon။ ကိုယ်ကတော့ ပါးစပ်ထဲတွေ့တာတွေလျှောက်ပြော သူတို့ လေးတွေမှာတော့ ဖလား ဆိုတာ ခွက်၊ နဂါးဆိုတာ dragon သံယောင်လိုက်၍ meaning ကျက်နေကြသည်။
သင်ခန်းစာ (၂) အိ အီ အီး မှာဆိုလျှင် လာပါပြီ
အရီးဆိုတာ Aunty လို့ အလွယ်တကူ ရှင်းလိုက်နိုင်ပေမဲ့… အဲ့ ဆီးသီး… ကလေးများထဲတွင် ဆီးသီးထုတ် စားဖူးသူပါက ကျမ၀မ်းသာရပါသည်။
သင်ခန်းစာ(၃) အု အူ အူး။ အက္ခရာ ‘ဥ’ ၀င်လာသည်။ သိပ်တော့ အခက်အခဲ မရှိလှ။
စတုတ္ထအချက်မှာ မြန်မာစာသည် သူတို့အတွက် အသုံးနည်း၍ မေ့လွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ပြီးသမျှကို မမေ့စေရန် ကြက်တူရွေးနှုတ်တတ်သင်နည်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ ဆက်စပ်၍ နားလည်ခြင်းမျိုးဖြစ်စေရန် ဖတ်စာ တစ်ပုဒ်ကို မဖတ်မီ ဘေးမှသရုပ်ဖေါ်ပုံကို အသေအချာကြည့်စေပြီး ဆရာနှင့် တပည့် အမေးအဖြေများ လုပ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဆန္ဒ စောသော ကျမက ပုံကိုကြည့်၊ ပြီးတော့မှ စာကိုဖတ်။ အခုတော့ သူများရေးထားတာတွေကို ဖတ်တတ်အောင် ဖတ်။ နောက်ဆိုရင်တော့ ပုံတွေ့ယင် ကိုယ့်ဖာသာ စာရေးတတ်ရမယ်ဟု ပြောတတ်ပါသေးသဖြင့် “ဟင်, ဆရာမ ခက်တယ်”ဟု ငြီးသူကငြီး၊ မျက်လုံးလေး ကလယ် ကလယ်နှင့် ကြည့်သူကကြည့်ကြပါသည်။
၂၀၀၅ခုနှစ် သြဂုတ်လမှစတင်၍ http://smcmeditation.org/ တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ကလေးများအတွက် မြန်မာစာ အရေးအဖတ် သင်တန်း၌ လုပ်အားပေးရင်း တွေ့ကြုံခဲ့သည်များဖြစ်ပါသည်။
(အတ္တဟိတ) သားကြီး မြန်မာစာ တတ်ဖို့အရေး ရှေ့တန်းတင်ခဲ့ပြီး (ပရဟိတ) နောက်ကလိုက်တာပါ။ ကလေးတွေကို စာသင်တဲ့ အတွေ့အကြုံ မရှိပါဘူး။ ဝေယျာဝစ္စ လုပ်ပေးရင်းကနေ ဆရာမလိုတော့ ၀င်သင်ရတာပါ။
သင်တန်းမှာ ကလေးတွေက အရွယ်စုံ၊ မြန်မာစာ မြန်မာစကား တတ်မြောက်မှုအဆင့်စုံ၊ သင်တန်းကိုလည်း ရက်မှန်မှန် မလာနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တနေ့တနေ့ သင်တန်းစမှ ကျောင်းရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေကို အဆင့်တူရာ အုပ်စုခွဲပြီး သင်ကြားပေးနေရပါသည်။ ယခု အခြေအနေအရ ဆရာ တဦးလျှင် အုပ်စု နှစ်စု၊ သုံးစု ကို တပြိုင်နက်တည်း သင်နေကြရပါသည်။ လုပ်အားအလှူ ပေးလိုသူများနှင့် သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်သော အကြံဉာဏ်ပေးလိုသူများကို ဤနေရာမှ ၀မ်းမြောက်စွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။
(ရိပ်သာ နေရာဟောင်း၌ ရိုက်ကူးထားသောပုံ ဖြစ်ပါသည်။)
သင်တန်းနေရာ - သတိပဌာန်ရိပ်သာ
Satipatthana Meditation Center (SMC)
40 Jalan Malu-Malu, Sembawang Springs Estate Singapore 769657,
Behind Sembawang Shopping Center (SSC)
သင်တန်းအချိန် - Every Sunday (2-5pm)
Labels: ကလေးများအတွက် မြန်မာစာ, သီတာ
ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ ဗာရာဏသိယံ ၀ိဟရတိ ဣသိပတနေ မိဂဒါယေ။ တတြ ခေါ ဘဂ၀ါ ပဉ္စ၀ဂ္ဂိယေ ဘိက္ခူ အာမန္တေသိ– “ဘဂဝေါ”တိ။ “ဘဒန္တေ”တိ တေ ဘိက္ခူ ဘဂ၀တော ပစ္စေဿာသုံ။ ဘဂ၀ါ ဧတဒဝေါစ–
အခါတစ်ပါးတွင် မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီပြည် ဣသိပတန ခေါ် မိဂဒါဝုန်တော၌ သီတင်းသုံး နေတော်မူ၏။ ထိုအခါတွင် ဘုရားရှင်သည် ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့အား “ရဟန်းတို့”ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ရဟန်းတို့ကလည်း “အရှင်ဘုရား”ဟု ပြန်လည် လျှောက်ထားကြသည်။ မြတ်စွာဘုရားက ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူသည် … ။
ရူပံ, ဘိက္ခဝေ, အနတ္တာ။ ရူပဉ္စ ဟိဒံ, ဘိက္ခဝေ, အတ္တာ အဘ၀ိဿ, နယိဒံ ရူပံ အာဗာဓာယ သံဝတ္တေယျ, လဗ္ဘေထ စ ရူပေ– “ဧ၀ံ မေ ရူပံ ဟောတု, ဧ၀ံ မေ ရူပံ မာ အဟောသီ”တိ။ ယသ္မာ စ ခေါ, ဘိက္ခဝေ, ရူပံ အနတ္တာ, တသ္မာ ရူပံ အာဗာဓာယ သံဝတ္တတိ, န စ လဗ္ဘတိ ရူပေ– “ဧ၀ံ မေ ရူပံ ဟောတု, ဧ၀ံ မေ ရူပံ မာ အဟောသီ”တိ။
ရဟန်းတို့ ရုပ်သည် အတ္တမဟုတ်။ ရုပ်သည် အတ္တဖြစ်ငြားအံ့၊ ဤရုပ်သည် နာကျင်ခြင်း မဖြစ်စေရာ၊ ရုပ်၌ “ငါ၏ ရုပ်သည် ဤသို့ဖြစ်စေ, ဤသို့ မဖြစ်စေရာ”ဟု ဖြစ်ရာ၏။ ရုပ်သည် အတ္တမဟုတ်၍သာ နာကျင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်၌ “ငါ၏ ရုပ်သည် ဤသို့ဖြစ်စေ, ဤသို့ မဖြစ်စေရာ”ဟု မရ။
ဝေဒနာ အနတ္တာ။ ဝေဒနာ စ ဟိဒံ, ဘိက္ခဝေ, အတ္တာ အဘ၀ိဿ, နယိဒံ ဝေဒနာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တေယျ, လဗ္ဘေထ စ ဝေဒနာယ– “ဧ၀ံ မေ ဝေဒနာ ဟောတု, ဧ၀ံ မေ ဝေဒနာ မာ အဟောသီ”တိ။ ယသ္မာ စ ခေါ, ဘိက္ခဝေ, ဝေဒနာ အနတ္တာ, တသ္မာ ဝေဒနာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တတိ, န စ လဗ္ဘတိ ဝေဒနာယ– “ဧ၀ံ မေ ဝေဒနာ ဟောတု, ဧ၀ံ မေ ဝေဒနာ မာ အဟောသီ”တိ။
ခံစားမှု ဝေဒနာသည် အတ္တမဟုတ်။ …
သညာ အနတ္တာ။ သညာ စ ဟိဒံ, ဘိက္ခဝေ, အတ္တာ အဘ၀ိဿ, နယိဒံ သညာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တေယျ, လဗ္ဘေထ စ သညာယ– “ဧ၀ံ မေ သညာ ဟောတု, ဧ၀ံ မေ သညာ မာ အဟောသီ”တိ။ ယသ္မာ စ ခေါ, ဘိက္ခဝေ, သညာ အနတ္တာ, တသ္မာ သညာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တတိ, န စ လဗ္ဘတိ သညာယ– “ဧ၀ံ မေ သညာ ဟောတု, ဧ၀ံ မေ သညာ မာ အဟောသီ”တိ။
မှတ်သားမှု သညာသည် အတ္တမဟုတ်။ …
သင်္ခါရာ အနတ္တာ။ သင်္ခါရာ စ ဟိဒံ, ဘိက္ခဝေ, အတ္တာ အဘ၀ိဿ, နယိဒံ သင်္ခါရာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တေယျုံ, လဗ္ဘေထ စ သင်္ခါရေသု– “ဧ၀ံ မေ သင်္ခါရာ ဟောန္တု, ဧ၀ံ မေ သင်္ခါရာ မာ အဟေသု”န္တိ။ ယသ္မာ စ ခေါ, ဘိက္ခဝေ, သင်္ခါရာ အနတ္တာ, တသ္မာ သင်္ခါရာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တန္တိ, န စ လဗ္ဘတိ သင်္ခါရေသု– “ဧ၀ံ မေ သင်္ခါရာ ဟောန္တု, ဧ၀ံ မေ သင်္ခါရာ မာ အဟေသု”န္တိ။
ပြုပြင်မှု သင်္ခါရတရားတို့သည် အတ္တမဟုတ်။ …
၀ိညာဏံ အနတ္တာ။ ၀ိညာဏဉ္စ ဟိဒံ, ဘိက္ခဝေ, အတ္တာ အဘ၀ိဿ, နယိဒံ ၀ိညာဏံ အာဗာဓာယ သံဝတ္တေယျ, လဗ္ဘေထ စ ၀ိညာဏေ– “ဧ၀ံ မေ ၀ိညာဏံ ဟောတု, ဧ၀ံ မေ ၀ိညာဏံ မာ အဟောသီ”တိ။ ယသ္မာ စ ခေါ, ဘိက္ခဝေ, ၀ိညာဏံ အနတ္တာ, တသ္မာ ၀ိညာဏံ အာဗာဓာယ သံဝတ္တတိ, န စ လဗ္ဘတိ ၀ိညာဏေ– “ဧ၀ံ မေ ၀ိညာဏံ ဟောတု, ဧ၀ံ မေ ၀ိညာဏံ မာ အဟောသီ”တိ။
သိမှု ၀ိညာဏ်သည် အတ္တမဟုတ်။ …
တံ ကိံ မညထ, ဘိက္ခဝေ, ရူပံ နိစ္စံ ၀ါ အနိစ္စံ ၀ါတိ? အနိစ္စံ, ဘန္တေ။
ယံ ပနာနိစ္စံ ဒုက္ခံ ၀ါ တံ သုခံ ၀ါတိ? ဒုက္ခံ, ဘန္တေ။
ယံ ပနာနိစ္စံ ဒုက္ခံ ၀ိပရိဏာမ ဓမ္မံ, ကလ္လံ နု တံ သမနုပဿိတုံ– “ဧတံ မမ, ဧသောဟမသ္မိ, ဧသော မေ အတ္တာ”တိ? နော ဟေတံ, ဘန္တေ။
ရဟန်းတို့… ထိုအရာကို အဘယ်သို့ ထင်မှတ်ကြကုန်သနည်း။
ရုပ်သည် မြဲသလော, မမြဲသလော။ မမြဲပါ အရှင် ဘုရား။
ယင်း မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲသလော ချမ်းသာသလော။ ဆင်းရဲပါ အရှင်ဘုရား။
ယင်း မမြဲသော ဆင်းရဲသော ဖောက်ပြန်သောတရားအား “ဤသည် ငါ့ဟာဖြစ်၏။ ဤသည် ငါဖြစ်၏။ ဤသည် ငါ့အတ္တဖြစ်၏”ဟု ရှုမြင်ခြင်းငှာ သင့်လျှော်ပါမည်လော။ မသင့်လျှော်ပါ အရှင်ဘုရား။
ဝေဒနာ နိစ္စံ ၀ါ အနိစ္စံ ၀ါတိ? အနိစ္စံ, ဘန္တေ။
ဝေဒနာသည် မြဲသလော, မမြဲသလော။ …
သညာ နိစ္စံ ၀ါ အနိစ္စံ ၀ါတိ? အနိစ္စံ, ဘန္တေ။
သညာသည် မြဲသလော, မမြဲသလော။ …
သင်္ခါရာ နိစ္စံ ၀ါ အနိစ္စံ ၀ါတိ? အနိစ္စံ, ဘန္တေ။
သင်္ခါရတရားတို့သည် မြဲသလော, မမြဲသလော။ …
၀ိညာဏံ နိစ္စံ ၀ါ အနိစ္စံ ၀ါတိ? အနိစ္စံ, ဘန္တေ။
၀ိညာဏ်သည် မြဲသလော, မမြဲသလော။ …
တသ္မာတိဟ, ဘိက္ခဝေ, ယံ ကိဉ္စိ ရူပံ အတီတာနာဂတာပစ္စုပ္ပန္နံ အဇ္ဈတ္တံ ၀ါ ဗဟိဒ္ဓါ ၀ါ သြဠာရိကံ ၀ါ သုခုမံ ၀ါ ဟီနံ ၀ါ ပဏီတံဝါ ယံ ဒူရေ သန္တိကေ ၀ါ, သဗ္ဗံ ရူပံ– “နေတံ မမ, နေသောဟမသ္မိ, န မေသော အတ္တာ”တိ ဧ၀ မေတံ ယထာဘူတံ သမ္မပ္ပညာယ ဒဋ္ဌဗ္ဗံ။
ရဟန်းတို့… ထိုသို့ဖြစ်၍ “အတိတ် အနာဂတ် ပစ္စုပ္ပာန်, အတွင်း အပြင်, အကြမ်း အနု, အယုတ် အမြတ်, အဝေး အနီး” အလုံးစုံသော ရုပ်အား “ဤသည် ငါ့ဟာမဟုတ်, ဤသည် ငါမဟုတ်, ဤသည် ငါ့အတ္တမဟုတ်”ဟု ဤသို့ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မှန်ကန်သောပညာဖြင့် ရှုရမည်။
ယာ ကာစိ ဝေဒနာ အတီတာနာဂတာပစ္စုပ္ပန္နာ အဇ္ဈတ္တာ ၀ါ ဗဟိဒ္ဓါ ၀ါ သြဠာရိကာ ၀ါ သုခုမာ ၀ါ ဟီနာ ၀ါ ပဏီတာ ၀ါ ယာ ဒူရေ သန္တိကေ ၀ါ, သဗ္ဗာ ဝေဒနာ– “နေတံ မမ, နေသောဟမသ္မိ, န မေသော အတ္တာ”တိ ဧ၀ မေတံ ယထာဘူတံ သမ္မပ္ပညာယ ဒဋ္ဌဗ္ဗံ။
… အလုံးစုံသော ဝေဒနာအား …
ယာ ကာစိ သညာ အတီတာနာဂတာပစ္စုပ္ပန္နာ အဇ္ဈတ္တာ ၀ါ ဗဟိဒ္ဓါ ၀ါ သြဠာရိကာ ၀ါ သုခုမာ ၀ါ ဟီနာ ၀ါ ပဏီတာဝါ ယာ ဒူရေ သန္တိကေ ၀ါ, သဗ္ဗာ သညာ– “နေတံ မမ, နေသောဟမသ္မိ, န မေသော အတ္တာ”တိ ဧ၀ မေတံ ယထာဘူတံ သမ္မပ္ပညာယ ဒဋ္ဌဗ္ဗံ။
… အလုံးစုံသော သညာအား …
ယာ ကေစိ သင်္ခါရာ အတီတာနာဂတာပစ္စုပ္ပန္နာ အဇ္ဈတ္တာ ၀ါ ဗဟိဒ္ဓါ ၀ါ သြဠာရိကာ ၀ါ သုခုမာ ၀ါ ဟီနာ ၀ါ ပဏီတာ ၀ါ ယေ ဒူရေ သန္တိကေ ၀ါ, သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ– “နေတံ မမ, နေသောဟမသ္မိ, န မေသော အတ္တာ”တိ ဧ၀ မေတံ ယထာဘူတံ သမ္မပ္ပညာယ ဒဋ္ဌဗ္ဗံ။
… အလုံးစုံသော သင်္ခါရာတရားတို့အား …
ယံ ကိဉ္စိ ၀ိညာဏံ အတီတာနာဂတာပစ္စုပ္ပန္နံ အဇ္ဈတ္တံ ၀ါ ဗဟိဒ္ဓါ ၀ါ သြဠာရိကံ ၀ါ သုခုမံ ၀ါ ဟီနံ ၀ါ ပဏီတံဝါ ယံ ဒူရေ သန္တိကေ ၀ါ, သဗ္ဗံ ၀ိညာဏံ– “နေတံ မမ, နေသောဟမသ္မိ, န မေသော အတ္တာ”တိ ဧ၀ မေတံ ယထာဘူတံ သမ္မပ္ပညာယ ဒဋ္ဌဗ္ဗံ။
… အလုံးစုံသော ၀ိညာဏ်အား …
ဧ၀ံ ပဿံ, ဘိက္ခဝေ, သုတ၀ါ အရိယသာဝကော ရူပသ္မိမ္ပိ နိဗ္ဗိန္ဒတိ, ဝေဒနာယပိ နိဗ္ဗိန္ဒတိ, သညာယပိ နိဗ္ဗိန္ဒတိ, သင်္ခါရေသုပိ နိဗ္ဗိန္ဒတိ, ၀ိညာဏသ္မိမ္ပိ နိဗ္ဗိန္ဒတိ။ နိဗ္ဗိန္ဒံ ၀ိရဇ္ဇတိ၊ ၀ိရာဂါ ၀ိမုစ္စတိ။ ၀ိမုတ္တသ္မိံ ၀ိမုတ္တမိတိ ဉာဏံ ဟောတိ။ “ခီဏာ ဇာတိ, ၀ုသိတံ ဗြဟ္မစရိယံ, ကတံ ကရဏီယံ, နာပရံ ဣတ္ထတ္ထာယာတိ” ပဇာနာတီတိ။
ရဟန်းတို့… ဤသို့ရှုမြင်သော အကြားအမြင်ရှိသော အရိယာသာဝကသည် ရုပ်၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ ဝေဒနာ၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ သညာ၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ သင်္ခါရတရားတို့၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ ၀ိညာဏ်၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ ငြီးငွေ့သော် စွဲလမ်းမှုကင်း၏။ စွဲလမ်းမှုကင်းသော် လွတ်မြောက်၏။ လွတ်မြောက်သော် လွတ်မြောက်ပြီဟု သိသောဉာဏ် ဖြစ်၏။ “ဇာတိကုန်ပြီ။ မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံးပြီးပြီ။ ပြုဖွယ်ကိစ္စကို ပြုပြီးပြီ, အခြားပြုဖွယ် မရှိတော့ပြီ” ဟု သိ၏။
ဣဒမဝေါစ ဘဂ၀ါ။ အတ္တမနာ ပဉ္စ၀ဂ္ဂိယာ ဘိက္ခူ ဘဂ၀တော ဘာသိတံ အဘိနန္ဒုံတိ။
မြတ်စွာဘုရားသည် ဤစကားအား မိန့်သောအခါ၊ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးပါးတို့သည် မြတ်စွာဘုရားဟောသော တရားတော်အား နှစ်သက် ၀မ်းမြောက်ကြကုန်၏။
ဣမသ္မိဉ္စ ပန ဝေယျာကရဏသ္မိံ ဘညမာနေ ပဉ္စ၀ဂ္ဂိယာနံ ဘိက္ခူနံ အနုပါဒါယ အာသဝေဟိ စိတ္တာနိ ၀ိမုစ္စိံသူတိ။
ဤသို့ (ဂါထာမဖက်) စကားပြေ သက်သက်ဖြင့် ဟောကြားအပ်သောအခါ၊ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးပါးတို့၏ စိတ်တို့သည် စွဲလမ်းခြင်းကင်း၍ အာသဝေါတရားတို့မှ လွတ်မြောက်ကြကုန်၏။
ဟန်းဖုန်း ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံ ဆလိုက်လေး side bar မှာတင်ထားပါတယ်။
ပုံနဲ့အတူ စာတွေပါ ရေးထားပါတယ်။ (ကလစ်နှိပ်ကြည့်ပါနော်။)
ပုံပါနေ့စွဲ မှားနေတာ သည်းခံပါ။ ဒီနေ့ရိုက်တာမို့ 10 July ဖြစ်ရမှာပါ။
ပြာလဲ့လဲ့ ကောင်းကင်မှာ ဟိုတဆုပ် ဒီတဆုပ် လွတ်လပ်စွာ ဖြန့်ကျဲထားတဲ့ အိစက်စက် တိမ်တိုက်တွေပေါ် ငြိမ့်ကနဲ ထိုင်ချလိုက်တယ်…။ နေခြည်နုနုက ညှင်းသွဲ့လေပြေနဲ့ လိုက်တမ်းပြေးတမ်း ကစားနေတယ်…။ တခါတခါ ခိုးခိုးခစ်ခစ်ရယ်လိုက်တဲ့ ရှင်နေမင်းရဲ့ ပါးဖောင်းဖောင်းကြီးက ဆွဲဖျစ်ချင်စရာ …။
ငှက်ကလေးတွေ တေးဆိုတာကို သစ်ရွက်လေးတွေက ဟာမိုနီလိုက်လို့… သစ်ကိုင်းတွေက ယိမ်းတိုက်နေရဲ့…။ တချို့က ဘယ်ကို တိမ်းလို့၊ တချို့က ညာယိမ်းမိရင် ချိုလွင်လွင် ရယ်သံတွေက စီရီရီထွက်လာသေး…။
ရှေ့ဆုံးက အားပေးနေတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေနဲ့ မြက်ခင်းစိမ်းတို့ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေက တဖျတ်ဖျတ်တောက်ပနေကြသလို၊ ဟိုးအဝေးက လှမ်းကြည့်နေကြတဲ့ မှိုင်းညို့ညို့တောင်တန်းတွေရဲ့ ဣနြေ္ဒက တော်ဝင်လို့ မဟာဆန်နေကြပြန်တယ်…။
စီးဆင်းခြင်းဟာ ရှင်သန်ခြင်းပါလို့ စမ်းချောင်းလေးက တသွင်သွင်ပြောနေတယ်…။ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်ရင်း နားထောင်နေတဲ့ ကျောက်တုံးလေးတွေက စမ်းချောင်းလေးရဲ့ အဖော်ပါတဲ့…။
လတ်ဆတ်ခြင်းရဲ့ ရနံက အာရုံရူးတွေနဲ့ ခပ်ဝေးဝေး ဖြစ်စေပြန်တယ်…။ ဟိုတိုး ဒီဝှေ့နဲ့ ကျီစားသန်တဲ့ လေပြေရယ်လေ… မကြိုက်ဖူး ပြောထားရက်နဲ့ အမှတ်တမဲ့ဆိုသလို ကလိလာလာထိုးတတ်သေး…။
ရိုးသားခြင်းသာ ထာဝရ အလှတရားလို့ လက်ကြီးပိုက်ထားတဲ့ မြေကြီးဆိုင်းဘုတ်ကို ဘယ်နေရာက ကြည့်ကြည့် မြင်သာ ထင်သာနေတယ်…။ ။